Ukuqapha Impilo Yengulube, Ukufuywa eNingizimu Afrika
Monitoring Pig Health
Ukuqapha Impilo Yengulube
Isihluthulelo sokuphathwa kwezempilo yengulube ukukhomba izinkinga nezifo ngaphambi kokuba ziphume ekulawuleni.
Ukwenza kanjalo, abalimi kudingeka bahlukanise phakathi kokuziphatha okuvamile nokungajwayelekile kanye nezimpawu zezempilo.
Izingulube izilwane ezihlakaniphile zomphakathi. Ngaphansi kwezimo ezivamile, bayoba ukudlala, bebuza futhi benze njengengxenye yeqembu.
Bayobonisa isithakazelo uma umuntu engena endaweni yokukhiqiza futhi angase asebenze ngomsindo ngokubheke ekuqondeni umsindo.
Uma begula, bangase bahoxise eqenjini, babe yi-lethargic futhi bangabi nalutho. Kungase futhi kunqatshelwe ezinye izingulube, okungabangela ukuguqulwa kwephethini lokulala lamabembu.
Ama-pig kufanele ahambe kalula.
Ama-pig ahlukanisa nabo bonke abanye iqembu, ukungabi namandla kanye namandla, ukuhamba nobunzima, ubunzima bokuvuka noma izingulube zivalelwe phansi, kubonisa ukuthi kukhona okungalungile.
Amadlebe, Amehlo kanye Namakhala
Ubuso kufanele buhlanzeke ngaphandle kokukhishwa kwamehlo. Amehlo aphikisayo, izindlebe zezindlebe noma izindlebe ezikhomba phansi zingase zibonise ukuthi ingulube izwa kahle. Imfihlo yomsindo kufanele ibe nemibala elula futhi ingabi ne-turbid, i-pustulent noma igazi.
Uboya kufanele ubukeke kahle futhi iphilile. Izingulube ezimnyama nezinemibala ngokuvamile zinamazinwele amakhulu, kanti izinhlobo zanamuhla ezimhlophe zinamawele amancane alala phansi. Izinwele eziphakanyisiwe, izinwele ezibophayo kanye nama-mangy patches konke okubonisa ukuthi kukhona okungalungile.
Isikhumba kufanele sihlanzeke ngaphandle kwamanxeba, izigaxa, izikhwama ezifakwe emaceleni, izilonda noma ukugaya. Ngokusho kwe-Pig Site article Ukuqaphela izifo epulazini, ukubhula okwesibhakabhaka emaphethelweni kungase kuhlotshaniswe nezifo ezibangelwa amagciwane, i-septicemia ephawulekayo ye-bacterial, ubuthi, i-mastitis ephawulekayo, i-metritis, i-pneumonia ephawulekayo nezinye izifo ezihlukahlukene. Ezingulube ezimhlophe zesikhumba ukukhishwa kwesikhumba kungase kube uphawu lwezifo noma ukutheleleka.
Ingulube enempilo izophefumula kalula futhi kalula. Izinga lokuphefumula elivamile lezingulube lincike eminyakeni yobudala: Ingane enempilo eneminyaka engama-50 kuya kwezingu-60 iphefumula ngomzuzu, i-weaner ephakathi kuka-25 kuya ku-40 ukuphefumula ngomzuzu kanye nezingulube ezindala eziba yimiphefumulo engu-13 kuya kwezingu-18 ngomzuzu.
Ukushaya kwenhliziyo evamile yengulube evuthiwe kungukushaya okungu-65 kuya kwangu-80 ngomzuzu nangaphansi kwezibopho ezingu-180 ngomzuzu ngezinsana.
Ukushisa komzimba okujwayelekile kwezingulube kuphakathi kuka-38,5 no-39 Degrees Celsius. Ingulube enezinga eliphezulu lokushisa elingaphezu kuka-41 degrees Celsius noma ngaphansi kwama-degrees Celsius angu-37 igula kakhulu. Okungalungile uma ingulube ishaqhazela.
Okungalungile uma ingulube ilahlekelwa isithakazelo sayo kokudla.
U-urine kufanele ube ophuzi okhanyayo ukuze ube namanzi anemibala. Ukuphuza umchamo omnyama, u-purulent noma wegazi akujwayelekile. Ingulube eyeke ukuvota iyagula ngokubulala.
Umswakama kufanele uqiniseke ngokuvumelana kokusebenza kweenkomo. Ukuqothulwa, uketshezi lwamanzi kumhubhe noma igazi elivuthayo akuvamile.
Kumele kube nobisi olwanele ngendwangu ngayinye, ngamanye amazwi, ingulube ngayinye kufanele ibe yindilinga futhi iqukethe. Kukhona okungahambi kahle uma umbele wokuhlwanyela unzima futhi uvimba, uma engakhiqiza okwanele noma ubisi noma kukhona ukushona kwezilwanyana.
Sebenzisa umqondo wakho wephunga ukuthola izinkinga, njengokungenwa umoya okuncane, amazinga aphezulu okugcoba noma amazinga aphezulu noma aphansi okumswakama, ukudla okubi ngisho nezilwane ezifile. Yini engakhululekile kubantu kungenzeka futhi ingakhathazeki ngezingulube.
Funda kabanzi mayelana nokushisa nokucindezeleka okubandayo.